Waa maxay sababta Kuliyada Hore? - Axdiga Waxbarashada Shirarka
ISBARASHADA WAA WAX WALBA
Barnaamijka Kulliyadda Hore ee Summit waxaa loo aqoonsan yahay mid ka mid ah fursadaha ugu guuleysiga badan ee Oregon. Wadahadal wada-hawlgalayaasha kulliyadaha bulshada ee gobolka oo dhan. Ardaydeena dugsiga sare waxay si firfircoon u raadinayaan danaha mihnadeed, iyagoo kasbanaya buundada kuleejka, IYO OO dhameystiraya shuruudaha dugsiga sare.
Ardayda ku jirta Barnaamijka Kulliyada Hore waxay ku guuleystaan ​​inay fasallo ku qaataan kulleejooyinka bulshada maxalliga ah.
Ardayda waxay la shaqeeyaan mid-mid-mid ah La-Taliyaha La-Taliyaha Koowaad si ay u abuuraan jadwal koorso ku habboon qaab nololeedkooda, himilooyinkooda, iyo danahooda.
Barnaamijka Kulliyada Hore wuxuu ardayda ka caawiyaa sidii ay ula kulmi lahaayeen fasalada kuliyada iyagoo wali ku jira dugsiga sare. Ardayda waxay dhisaan xirfadahooda isgaarsiinta, waxay sare u qaadaan maareynta waqtigooda, oo ay bartaan sida ay ugu doodaan nafsadooda ee goob taageero leh. Barnaamijkani wuxuu ardayda ka caawiyaa inay u diyaar garoobaan baahiyaha dhabta ah ee jaamacadda.
Barnaamijka Kulleejka Hore wuxuu qirayaa ardayda jinsiyad, midab, asal qaran iyo asal ahaan asal ahaan xuquuqda, mudnaanta, barnaamijyada, iyo hawlaha guud ahaan la siiyay ama loo diyaariyey ardayda dugsiga. Uma kala takoorin ku saleysan jinsi, midab, asal qaran iyo jinsiyadeed xagga maamulka ee siyaasaddiisa waxbarasho, siyaasadaha aqbalida, iyo barnaamijyada kale ee dugsiga la maamulo.